Tarjumadii: Ibraahim Saalax | SomaliTalk Denmark
Madaxweynaha dalka Ciraaq Saddaam Xuseen ayaa codsaday inuu wada hadal toos ah la yeesho madaxweynaha Mareekanka George W. Bush. Saddaam Xuseen oo u waramayay taleefishinka caanka ah ee Mareekanka ee CBS ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu madaxweynaha Mareekanka kala doodo arrimaha ku saabsan guud ahaan eedeymaha loo soo jeedinayo maamulka Baghdaad.
Weriyaha Taleefishinka CBS Dan Rather oo qaadayay wareysiga Saddaam Xuseen uu shaleey isniin tr. 24/02/2003 la yeeshay ayaa ku saabsanaa weydiimo ay ka mid ahaayeen waxa uu madaxweynaha Ciraaq ka aaminsan yahay shacabka Mareekanka, Usaama Bin Laden, shacabkiisa reer Ciraaq iyo gantaallada ka mid yihiin Al-SamoudII.
Madaxweynaha Ciraaq Saddaam Xuseen isagoo xusaya doonista uu doonayo inuu si toos ah ula doodo Bush ayaa wuxuu yiri “waxaan diyaar u ahay inaan wada hadal toos ama dood ah la sameeyo madaxweynahaaga, wixii aan doono ayaan sheegayaa, isna wuxuu doono ha sheego, waxayna tanina u noqon doontaa isaga fursad, haddiise ay kaga go’an tahay inuu dagaal qaado iyaduna waa mid noqon karta mid lagu qanciyo caalamka”.
Madaxweynaha Ciraaq wuu sii watay hadalkiisa oo wuxuu haddana yiri “waxaan arrintan u arkaa inay tahay fikrad wacan, annigoo ka duulaya ixtiraamka aan u hayo shacabka Mareekanka, iyo kan Ciraaq iyo shucuubta caalamka-ba waxaan ugu yeerayaa qabashada arrintan iyada ah” wuxuuna isagoo su’aal is weydiinaya yiri markale “innagoo madaxdii ah maxaan fursaddaan oo kale uga faa’iideysan la’nahay?”.
Wareysiga oo socday 3 saacadood ayaa wuxuu weriyaha ku sheegay madaxweynaha Ciraaq inuu ahaa nin aad u degganaa markuu warsanayay, hase ahaatee uu dhinaca kalena uu u ekaa qof ku talo gashan in dagaal lagu qaadi doono Ciraaq. Wuxuu weriyaha oo arrintaan ka hadlaya yiri “Saddaam Xuseen wuxuu si dhab ah og yahay inay dhowdahay goorta Ciraaq dagaalka lagu qaadi doono, hadallada Bush uu yirina wuxuu u qaatay si dhab ahaaneed”.
Dhinaca kale wuxuu Saddam wareysigiisa ku diiday inuusan ku fekeraynin inuu burburiyo gantaallada loo yaqaano Al-SamoudII oo ay sidaas horey uga dalbatay Qaramada Midoobay, wuxuuna sidoo kale si daran ku gacan sayray inay gantaalladan yihiin kuwo jebinaya qaraarada u degsan Qaramada Midoobay.
Saddaam wuxuu yiri “Ciraaq waxaa loo oggol yahay gantaallada macquulka ah, dhinaceenana waxaan ku qasbannahay inaan ixtiraamno. Ma lihin gantaallada jebinaya xadkii loogu tala galay”, wuxuuna intaa ku daray inay mustaqbalka Ciraaq doonayso inay burburiso gantaallo dhowr ah.
Ninka u hadla aqalka cad ee Mareekanka Ar Fleischer ayaa ku tilmaamay codsigii Saddaam uu soo bandhigay inuu ahaa “mid dhayal-dhayal loo yiri“, wuxuuna sheegay inuu wareysigii Saddaam ugu muhiimsanaa dhinaca ka hadlayay diidmada uu Saddaam diiday inuu burburiyo gantaallada Al-SamoudII, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay tilmaan cad oo kale u tahay inuu haysto hubka wax gummaada, markaasina uusan doonaynin inuu qirto ama uu burburiyaba.
Maalintii jimcihii ee la soo dhaafay ayaa madaxa hub baarayaasha Qaramada midoobay Hans Blix warqad u gudbiyay maamulka Ciraaq, taasoo uu ku sheegay inay billaabato hub burburinta ay ka mid yihiin gantaallada Al-SamoudII kahor 1-da bisha maarso, wuxuuna Hans Blix qoraalkiisa ku caddeeyay inay tallaabadan iyada ah sabab u noqon karto arrimaha sababi kara inuu Mareekanka iyo Xulufadiisuba ay dagaal ku qaadaan Ciraaq.
Mareekanka iyo Britain ayaa ah dalalka sida daran ugu ololeenaya dagaal lagu qaado Ciraaq, halka dalalka France, Germany iyo Rush-kuna ay ka soo horjeedaan dhiilladaas dagaaleed ee ay wadaan USA iyo Britain. Inkastoo uu Mareekanka iyo Britain ay u cuskanayaan tallaabadoodaas ay doonayaan, haddana waxaa garab socda aragtiyo kale oo maslaxadeed oo ay dad badani u arkaan inay ka danbeyso dagaalka ay u gurbaan tumayaan Mareekanka iyo Britain.
Si kastaba, ha ahaatee waxaa hubaal ah in dagaalku mar weliba faa'iido lahayn, iyadoo khasaaraha ka dhalan karana uu sabab u noqon karo dhimmasho fara badan, burbur dhinac kasta ah iyo degganaansho la’aan ka dhex abuurnta gobolka.
Waraysigii Saddam Xuseen ee caawa laga soo daayey TV-ga Channel 4 ee dalka Ingiriiska ka daawa HALKAN
SHIRKII SHABAKADDA XIRIIRKA SOOMAALIYEED AY KU YEESHEEN MAGAALLADA ODENSE, DENMARK
Shirkaas oo ahaa mid aad u qiime badnaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ahaa: Tarbiyadda caruurta, Sumcadda soomaalida Denmark, Mashaariicda dib u dhiska Soomaaliya iyo.. GUJI 24/2